मनाङमा एउटै ठेकेदारको एकछत्र रजाई : ठेक्का लिने, काम नगर्ने ! - Jyotinews
मनाङमा एउटै ठेकेदारको एकछत्र रजाई : ठेक्का लिने, काम नगर्ने !
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज १८ गते ९:११
१८ असोज, मनाङ । मनाङमा एउटै ठेकेदार कम्पनीले राज गर्दै आएको झण्डै पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि असारमा द क्याराभान कम्पनीले मनाङको दूधखोलामा पुल बनाउने ठेक्का पायो । एक वर्षभित्रै सक्ने गरी मृत सञ्जीवनी, खड्का कृष्ण र क्याराभानले संयुक्तरूपमा पाएको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । मनाङको पुरानो सदरमुकाम थोँचेबाट पल्लोगाउँ तिल्चे हुँदै उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने सडकमा पर्ने यो पुल विसं २०७३ असारमा ठेक्का लगाइएको थियो ।